एनसीसी बैंकको नाफा १४ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य वित्तीय सूचक कस्तो ? – Insurance Khabar
एनसीसी बैंकको नाफा १४ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य वित्तीय सूचक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७६, बुधबार ०९:५४
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा १ अर्ब ५२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आथिएक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको नाफा १४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा बैंकले १ अर्ब ३४ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को चौथो त्रैमासको यस अवधिसम्म आइपुग्दा बैंकको वितरण योग्य नाफा १ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी सात अर्ब एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । भने जगेडा कोष तीन अर्ब ५९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सञ्चिती गरेको छ ।
बैंकको यस अवधिसम्म आइपुग्दा ३ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको खुद व्याज आम्दानी ९२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बैंकले एक अर्ब ६१ करोड २६ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको थियो ।
समिक्षा अवधिमा बैंकले ६७ अर्ब तीन करोड ५६ लाख निक्षेप संकलन गरी ६१ अर्ब १३ करोड १८ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । जुन अघिले आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको भन्दा १८ निक्षेप संकलन बढी हो कर्जा लगानी १९ प्रतिशतले बढी हो ।
बैंकको खराब कर्जा २ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । मूल्य आम्दानी अनुपात ११ दशमलव ३१ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ एक सय ७८ रुपैयाँ ३८ पैसा, प्रति शेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ७५ पैसा, आधार ब्याजदर १०.२३ प्रतिशत रहेको छ ।